Bit By Bit - Ny fandinihana ny fitondran-tena - 2.3.1.3 Non-reactive
Fandrefesana dia mainka mety hiova fitondran-tena amin'ny angon-drakitra lehibe loharanom-baovao.
Olana ny fiaraha-monina iray fikarohana dia ny hoe ny olona afaka manova ny fitondran-tena, rehefa fantany fa izy ireo ho hitan'ny mpikaroka. Ara-tsosialy ny mpahay siansa amin'ny ankapobeny hoe fitondran-tena io fanovana ho setrin'ny mpikaroka fandrefesana reactivity (Webb et al. 1966) . Lafiny iray amin'ny tahirin-kevitra lehibe izay mpikaroka maro no mahita fa nampanantena dia mpandray anjara amin'ny ankapobeny tsy mahafantatra fa ny antontan-kevitra ireo rehefa voasambotra na dia lasa zatra izany fanangonana antontan'isa io fa tsy miova ny fitondran-tena intsony. Satria izy ireo tsy reactive, noho izany, maro ny loharanom-lehibe angon-drakitra azo ampiasaina mba hianatra fihetsika izay tsy amendable ny marina refy teo aloha. Ohatra, Stephens-Davidowitz (2014) Nampiasa ny fielezan'ny mpanavakavaka teny amin'ny fikarohana ara-poko fanontaniana mba handrefy animus amin'ny faritra samihafa ao amin'ny United States. Ny tsy reactive sy ny lehibe (jereo ny fizarana taloha) toetry ny fikarohana tahirin-kevitra alefa fandrefesana izay ho sarotra mampiasa fomba hafa, toy ny fanadihadiana.
Non-reactivity, na izany aza, dia tsy azo antoka fa ireo antontan-kevitra dia toa hita taratra mivantana ny olona ny fitondran-tena na ny toe-tsaina. , Ohatra, toy ny respondent nilaza tamin'i Newman et al. (2011) , "Tsy hoe tsy manana olana, fotsiny aho fa tsy nametraka azy ireo tao amin'ny Facebook." Amin'ny teny hafa, na dia angon-drakitra lehibe sasany loharanom-baovao dia tsy reactive, dia tsy afaka ny ara-tsosialy foana mahate hihinana ilay fitongilanana , ny fironana ho an'ny olona mba te-hanolotra ny tenany amin'ny fomba tsara indrindra. Koa, raha milaza aho ambany kokoa, ireo loharanom-baovao ireo indraindray angon-drakitra fiantraikany noho ny tanjona ny sehatra ny tompony, ny olana atao hoe algorithmic mampifangaro (voalaza etsy ambany kokoa).
Na dia tsy reactivity misy tombony ho an'ny fikarohana, Tracking ny olona ny fitondran-tena tsy misy ny fankatoavana sy ny fanentanana mametraka etika olana resahina eto ambany sy amin'ny an-tsipiriany ao amin'ny Toko faha 6. A-bahoaka valifaty manohitra fitomboan'ny nomerika ny fanaraha-maso mety hitarika lehibe angon-drakitra rafitra ho tonga bebe kokoa reactive rehefa mandeha ny fotoana, ary mahery ahiahiny momba ny Hafanàm-po an fanaraha-maso mety hitarika ny olona sasany mihitsy aza mba miezaka misafidy-avy amin'ny angon-drakitra lehibe rafitra tanteraka, tsy mitsaha-mitombo ny ahiahy momba ny tsy-representativity (voalaza etsy ambany kokoa).
Ireo telo lahy tsara toetra mampiavaka ny fiaraha-monina lehibe ho an'ny angon-drakitra fikarohana-lehibe, foana-on, ary tsy reactive-ankapobeny Ireo antontan-kevitra mipoitra, satria loharanom-baovao dia tsy noforonina ho an'ny fikarohana ny mpikaroka. Ankehitriny, aho hitodika any amin'ny fito fananan 'angona loharanom-baovao lehibe izay ratsy ho an'ny fikarohana. Ireo endri-javatra ihany koa ny mirona mba hitsangana satria antontan-kevitra io dia tsy noforonina ho an'ny fikarohana ny mpikaroka.